Muzvare Coventry Vokurudzirwa Kugadzirisa Zviri Kunetsa Mitambo Munyika
Kirsty Coventry Zimbabwe Sports Minister
Mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa ichiita zvemitambo inoti yakazvipira kudzoka kumusha kuzosimudzira mabasa ezvemitambo, asi ndokunge gurukota idzva rinoona nezvemitambo, Muzvare Kirsty Coventry, vagadzirisa matambudziko ari kusangana nevose vanoita zvemitambo.
Mudzidzisa wemutambo wekiriketi muSouth Africa, Kevin Mwase, anoti ari kushushikana zvikuru nekushaikwa kwezvirongwa zvinofanira kutevedzerwa nevatambi vekirikiti. Anoti ichi ndicho chimwe chezvichemo zvinofanirwa kugadziriswa naMuzvare Coventry
Mwase, uyo akambotambawo mutambo uyu muZimbabwe, anoti Zimbabwe haikoshesi mitambo sebasa, nokudaro Muzvare Coventry vakagadzirisa dambudziko iri, akazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mutambo uyu munyika yake.
Mumwewo mudzidzisi wemitambi yakasiyana siyana pachikoro cheSacred Heart College muJohannesburg, Nathaniel Zondo, anoti akazvipira kudzokera kumusha gurukota rezvemitambo rikagadzirisa matambudziko akaita senhandare dzekuitira mitambo, midziyo uyewonekushaikwa kwemari.
Murairidzi wekiriketi muSouth Africam, uyo akambotamba mutambo uyu muZimbabwe, Vincent Herold, anoti anoda kuona Muzvare Coventry vachipa mukana vanhu vane ruzivo rwekiriketi kutangamira mutambo uyu muZimbabwe.
Herold anotiwo kusapiwa mari yakakodzera kuvatambindiko kwakaita kuti vatambi vakawanda vabude muZimbabwe uye zvichavatorera nguva refu kuti vadzokere kuZimbabwe kunyange hazvo vachiti vane chido chekudzokera.
Mutambi wenhabvu akamboita mbiri kumusha, VaCharles Nechironga, anoti vatambi vose vanofanira kupiwa mibairo yavo yakakwana uyewo zvematongerwo enyika hazvifanire kukanganisa kufambiswa kwemitambo.
Nechironga, uyo akasiya zvenhabvu, ari kudzidzisa mutambo wetenisi muSouth Africa pari zvino. Anoti kana Muzvare Coventry vakakwanisa kuti hurumende igadzirise nzvimbo dzekuitira mitambo, kuwanisa vatambi midziyo nembatya, naivowo vakazvipira kudzokera kumusha kunosimudzira mitambo.
Zimbabwe ine nyanzvi dzakawanda kunze kwenyika dzinotamba mitambo yakaita sekirikiti, nhabvu, rugby, netball, tennis, basketball, uyewo kumhanya.
Pari zvino vazhinji vavo vari kushandisa ruzivo rwavo mukudzidzisa vechidiki vekune dzimwe nyika.
Wisdom Koma ndemumwe weavo vane ruziwo rwakadzama rwekudzidzisa vechidiki mutambo we tennis. Koma anoti hurumende inofanira kuona kuti paiswa zvirongwa nezvikoro zvevechidiki zvekusimidzira mutambo wetennis.
Vamwe vatambi vane mukurumbira vari kunze kwenyika vanosanganisira, Khama Billiard, uyo ari kutambira Kaizer Chiefs, Henry Olonga naCharles Coventry vanotamba kirikiti naDumisani Mhlanga anotamba hockey.